Mas'uuliyiin 'gabaad siiya' xubnaha Al-Shabaab kasoo goosta oo loo digay
Maxkamadda Ciidamadda Soomaaliya ayaa shaacisay in ay "talaabo adag" ka qaadeyso madaxdaasi.
MUQDISHO, Soomaaliya – Gudoomiyaha Maxkamadda Sarre ee Soomaaliya ayaa magaaladda Baydhabo ka sheegay in ay jiraan mas'uuliyiin dowladeed iyo qabaa'ilo "gabaad siiya" xubnaha kasoo goosta Al-Shabaab.
"Qofkii lagu ak-arko ama gurigiisa ku haya qof Shabaab ah oo soo baxsaday oo aanan la diiwaan-gelin, wuxuu lamid yahay Al-Shabaab, waxaana laga qaadayaa talaabadii Shabaabka laga qaadi lahaa," ayuu yiri.
"Suurtogal ma noqoneyso in qofna la marsiiyo nidaamka Wasaaradda, midna aanan la marsiin oo uu albaabka kasoo galo aanan la aqoon inuu is-qarxinaayo, adna qabiilkaaga hayso, annaga keygaan haysaneynaa," ayuu xusay.
"Markii ay hay’addaha amniga soo dhahaan qofkaasi waa lagu dhex-fasixi karaa bulshadda, hala sii daayo, waliba waxaa sii fiican in damaanad lagu qoro oo ah sarkaal ama Xildhibaan," ayuu hoosta ka xariiqay.
Saraakiisha Ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dileen xubno badan oo kamid ah Al-Shabaab...
Fahfaahin ku saabsan Qarax ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 27.12.2018. 14:51